Mogadishu Journal » Mareykanka oo joojiyey Diyaaradaha Being 737 Max 8
Mareykanka oo joojiyey Diyaaradaha Being 737 Max 8
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday in la joojiyo duulimaadyada diyaaradaha Being 737 Max 8 oo ah nooca diyaaradii dhawaan ku burburtay duleedka Magalada Addis Ababa ee Xarunta dalka Itoobiya.
Arrintaan ayuu ku micneeyey Trump cabsi dhinaca amniga ah oo uu sheegay in Mareykanka iyo dhammaan dalalka Caalamka uu muhiim u yahay,waxaana mareyakna uu ku biiray dalalka joojiyey isticmaalaka Shirkadda Diyaaradaha Being 737 Max 8 ee Mareykanka lagu farsameeyo.
Todobaadkan ayaa dalal dhowr ah ay joojiyeen isticmaalka Diyaaradaha Shirkadaas,waxaana Madaxweyne Trump uu horay u diidanaa in la joojiyo, balse markii dambe uu ogolaaday.
Go’aanka Mareykanka ayaa u muuqda mid uu dalal badan ku raacay go’aanka ay ka qaateen isticmaalka Diyaaradaha Being 737 Max 8 , waxana sidoo kale saldhig looga dhigay xog-aruurin laga soo sameeyey goobtii ay ku burburtay diyaaradii Ethiopian Airlines ee duleedka Magalada Addis Ababa.
Maraykanka oo war ka soo saaray duqeyn cusub oo ay ka fuliyeen Sh/hoose